Monisha Bajaj: waxbarashada nabadda ee muhiimka ah = falanqaynta + wakaaladda - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
“Barayaasha nabadda ee muhiimka ah, manhajyo khuseeya deegaanka oo ku saabsan arrimaha xuquuqda aadanaha iyo caddaaladda waa in la sameeyaa iyada oo ujeedadu tahay in si isku mid ah loo kobciyo falanqaynta ka -qaybgalayaasha ee sinnaan -darrooyinka qaabdhismeedka iyo dareenka wakiilnimo si ay wax uga qabtaan arrimahan.” - Monisha Bajaj (2008)
#dhalashada nabadeed ee halista ah
Nobel Peace Prize 2018: waa xilli la baran karo
Marka laga reebo baaritaanka, marka laga reebo praxis-ka, shaqsiyaadka runti dad ma noqon karaan. Aqoontu waxay ku soo baxdaa oo kaliya hal abuur iyo dib u ikhtiraacid, iyada oo loo marayo nasasho la’aanta, samir la’aanta, sii wadida, bina aadamka wax baaraya ee ku raad jooga adduunka, adduunka, iyo midba midka kale. ” -Paulo Freire [sii wad akhriska…]
Doorka weyn ee Haweenka ee Dhaqanka Nabadda
Danjire Anwarul K. Chowdhury wuxuu ka hadlayaa doorka muhiimka ah ee haweenku ka ciyaaraan kobcinta dhaqanka nabadda wuxuuna sheegayaa in qayb muhiim ah oo ka mid ah dhismaha dhaqanka nabadda ay tahay waxbarashada nabadda. [sii wad akhriska…]
Barida Kheyraadka Ku Saabsan Xiriirka & Mudnaanta
April 14, 2017 CV 0
Ardayda dhigata Jaamacadda Georgetown's Spring 2017 Koorsada Waxbarshada Nabadda (JUPS-407) waxay kobcisay aruurinta kheyraadka waxbaridda iyo maqaallo ku saabsan mudnaanta iyo isbahaysiga si ay u taageeraan bisha Abriil 18-keeda wax dhigista: Mudnaanta [sii wad akhriska…]